विद्यार्थी डन’को आक्रमणबाट मुस्किलले बाँचेका प्राध्यापकको बकपत्र « गोर्खा आवाज
विद्यार्थी डन’को आक्रमणबाट मुस्किलले बाँचेका प्राध्यापकको बकपत्र
यी शब्दहरूमा मेरा रगत लत्पतिएका छन् र मेरो शरीरका घाउ, पीडा बोलेका छन् ।प्रियजनहरु, यो मेरो कुनै प्राज्ञिक लेख होइन । मलाई गरिएको दानवीय र बर्बर हमलापछिका मेरा जीवनका सुस्केरा हुन् ।तपाईंहरुले यसबाट एउटा निरीह शिक्षकको जीवन बिनाकारण कसैको इगो, घमण्ड, रिस र आर्थिक अभिष्टको शिकार कसरी बन्छ भन्न थाहा पाउन सक्नुहुनेछ ।
ममाथि भएको सांघातिक हमलाका कारणले गर्दा गएको एक महिनादेखि म जीवन र मृत्युसँग कठोर संघर्ष गरिरहेको छु । ओछ्यानमा कोल्टो फेरेर राम्ररी सुत्न सकेको छैन । मेरो मुटुकाे धडकन र दिमाग सामान्य हुन सकेको छैन । एक हप्तासम्म दिशापिसाब गर्न सकिनँ । पाइपको सहारा लिनुपर्‍यो । टाउको एकनासले दुखिरहेको छ ।
भाँच्चिएको खुट्टा यताउता सार्न हुँदैन । वासरुम जानसक्नु मेरा निम्ति कठिन कुरा भएको छ । शरीरमा चोट नभएको कुनै ठाउँ छैन । आजभोलि हरेक रात म यस्तो डरलाग्दो सपना देख्छु – बाहिर ढोका बन्द हुन्छ, तर तीन जना मान्छे म सुतिरहेको कोठामा झ्यालबाट छिर्छन् र पछाडिबाट मलाई च्याप्प समात्छन्, अनि मेरो श्वास प्रश्वास बन्द हुन्छ र म चिच्याउँछु । मेरी दिदीहरुका आँखा अझै ओभाएका छैनन् ।
आमाले अहिलेसम्म खाना खानु भएको छैन । मेरी अबोध छोरी र छोरालाइ म आफूलाई के भएको हो भनेर भनौँ ? मसँग उत्तर छैन ।उनीहरु मलाइ मार्न चाहन्थे । तर म बाँचे । म बाँच्नु मेरा प्रियजनका लागि खुशीको कुरा हो । उनीहरु मलाई एक्लै छ भन्ठान्थे । मलाई पनि कहिलेकाहिँ आफू एक्लै छु भन्ने नलागेको कहाँ हो र ?तर म एक्लै रहेनछु । प्यारा विद्यार्थी, प्राध्यापक साथी, पत्रकार मित्र, र आदरणीय गुरुजनहरुमैले जीवन र मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेका बेला तपाईंहरुले दर्शाएको माया, प्रेम, करुणा र सद्‍भावका लागि म ऋणी छु ।
तपाईंहरुले मप्रति प्रकट गर्नुभएको माया, करुणा, सद्भावका अगाडि घृणाका सञ्चालकहरु हार्नैपर्छ । तर पनि न्याय किनबेच हुने र दलको आडमा जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि छुट हुने यो देशमा भन्न के सकिन्छ र ? मलाई त्यसरी भाडाका गुण्डा लगाई पछाडिबाट आएर हान्नुपर्ने कारण के थियो ? यो गर्न कायरहरुले कोबाट कति पैसा पाएका थिए ? एक त यहाँ मान्छेको जीवन यसै असुरक्षित छ । अहिले कोरोना संक्रमणको दर पाँच हजार पुग्न थालिसक्यो । मेरो आफ्नै घरले पनि कोभिड झेल्यो । घरमा बस्नुपर्ने, परीवारको देखभाल गर्नुपर्ने यो बेला म आफै अशक्त बनर आफन्तको शरणमा बस्नुपर्‍यो ।
यो कुनै लेख लेख्ने समय नभए पनि अस्पतालको बेडमा परेदेखि हालसम्म घटना किन र कसरी भयो भन्ने प्रश्नबाट भाग्न नसकेकाले सकिनसकी लिपिबद्ध गरेको हुँ ।विश्वविद्यालय, न्याय र देशएक महिना दुःख गरेर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी श्याम ज्ञावालीको कमान्डले ५ जना हमलाकारी पक्रेर काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई बुझायो । दुईजना मूल अपराधी फरार छन । उनीहरु कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला, शेखर कोइराला र नेविसंघका महामन्त्री बलदेव तिमिल्सेनाको संरक्षणमा छन भन्ने मैले सुनेकाे छु ।प्रहरीको अनुसन्धान, सरकारी वकिलको कार्यालयसमक्ष अपराधीले दिएको बयान, दायर भएको अभियोग पत्र, अदालतको इजलासमा समेत अपराधीहरुले गरेको बयानबाट मार्ने उद्देश्यले मलाई हमला गरेको स्विकारिसकेका थिए । अनुसन्धानका प्रमाणलाई बेवास्ता गर्दै सेटिङमा थुनछेक बहसमार्फत न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको आदेशबाट अपराधी सामान्य धरौटीमा छाडिए ।
यो त अपराधीले हामीले मार्ने उद्देश्यले नै हानेको हो भन्दाभन्दै, न्यायमूर्तिले ‘होइन तिमीहरुले त्यस्तो केही गरेका छैनौं, यस्ता साधारण कुटपिट त भइरहन्छन्, तिमीहरुलाइ जहाँ जानु छ जाउ, जे गर्न मन लाग्छ गर भनेर छाडिदिए जस्तै भयो । यो निर्णयले मजस्ता पीडितको घाउमा नुनचुक मात्रै छर्केको छैन र अपराधीलाई उन्मुक्ति हुने सुविधा मात्रै दिएको छैन, भविष्यका निम्ति गलत नजिर स्थापित गरेको छ ।
यस्ता पूर्वाग्रही, विवेकशुन्य निर्णय गर्ने न्याय सम्पादनको परिपाटिले बसाउन खोजेको नजिर कस्तो हो ? प्रियजनहरु मैले वर्षौदेखि पसिना र रगत बगाइरहेको मेरै विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा दिनदहाडै सांघातिक हमला बेहोर्नुपर्‍यो । यो विश्वविद्यालय मैले जतिसुकै आफ्नो ठाने पनि मेरो होइन रहेछ ।
यदि यो मेरो हुन्थ्यो भने मजस्तो एक निहत्था शिक्षकलाई पिछा गरीगरी मलाई मार्न आउने हिम्मत कसैले गर्न सक्दैनथ्यो । गर्नेहरु तुरुन्तै कारबाहीका हकदार भइसक्थे । त्यसो गर्नुको साटो, आँखामा पट्टी बाँधेर, त्यस्ता अपराधीलाइ उन्मुक्ति दिने न्यायालय पनि म जस्ताको रहेनछ । यो विश्वविद्यालय, यो न्यायालय, र यो देश गुण्डाहरुको रहेछ । मलाई उनीहरुले बिनाकारण विश्वविद्यालय परिसरमै आक्रमण गर्ने आँट त्यसै गरेका होइन रहेछन् । दलको आडमा यो देशको कानुन, न्यायालय, विश्वविद्यालय र प्रहरीको खिल्ली उडाउन सकिन्छ र उनीहरुले छुन पनि सक्दैनन भन्ने आंकलन गरेर उनीहरुले यस्तो हर्कत गरेका हुन् ।
त्यतिमात्रै कहाँ हो र यो देशको आफूलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो ठेकेदार ठान्ने नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेविसंघले खुलेआम अपराधी जोगाउने आन्दोलन गर्‍यो । सामान्य कुटपिट गरेका हुन् यस्तो त भइरहन्छ, भन्यो । अपराधीलाई आफ्ना नेता भन्यो र उनीहरु विरुद्धका जाहेरीलाई झुटा भन्यो । कांग्रेसभित्र कोही इमानवान् राम्रा मान्छे हुनुहुन्छ भने अपराधीको संरक्षणमा पार्टी लागेको छैन भनेर प्रमाणित गरिदिनोस् । मलाई मार्न तम्सिनेहरु को हुन् भनिदिनुपर्‍यो । यही २०७७ साल अश्विन २० गते ।
बिहान पौने दश बजे डेढ दशकदेखि आफू प्राध्यापनरत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय परिसरभित्रैको नेपाल बैंक लिमिटेडको एटीएमबाट पैसा झिकेर आवासगृहतिर फर्कंदै थिएँ । मलाई पछाडिबाट एक्कासी हिर्काइयो । मैले जीवनमा कहिल्यै नदेखेका, नचिनेकाहरु धुरिएर मलाई हानिरहे । फलामका रड, भाटा आदिआदिले । उनीहरु मेराे पिछा गर्दै आएका थिए । क्रिकेट मैदान नजिकको अलि एकान्त जंगलको बाटोमा पछाडिबाट एकजनाले मेरो टाउकोमा हान्न ठिक्क परेको मैले कसोकसो देखें । अनि बिन्ति बिसाएँ, भाइ मलाई किन हान्न खोज्नु भएको ? जान अन्जानमा केही गल्ती भए माफी पाउँ ।’ एक शब्द पनि नबोली उसले बोकेका चिर्पट मेरो टाउकोमा वर्षियो । चिर्पट र रड बोकेका अरु तीन जना तलबाट घेर्दै आउन थाले । पहिलो मान्छेले मेरो टाउकोलाई निशाना बनाएर हानेका पाँच वटा जति प्रहार मेरो हातले छेक्दै टाउकोमा बजारिए । तर जब चारै जनाले मलाई लखेट्दै, भाटाले जीउमा घोच्दै हान्न थाले, मेरो जोड चलेन । भाग्न पनि सकिनँ । म चोटबाट रन्थनिसकेको थिएँ ।
माथि साधारण रातो टिसर्ट, खुट्टामा फितावाला चप्पल र लुज ट्राउजर घुँडामाथिसम्म दोबारेको थिएँ । टाउको, पेट, छातिमा हानिएका अनगिन्ती चोट धान्न सकिनँ । अघिसम्म सद्दे मेरो दाहिने खुट्टा हेर्दाहेर्दै भाँच्चिएपछि म वारी सडकबाट लतारिदै उछिट्टिएर पारि क्रिकेट मैदानपट्टिको सडकतर्फ ढले । त्यो बीचमा आएका केही मोटरसाइकल र पैदल यात्रीसँग मैले गुहार मागे । अहँ, कसैले वास्ता गरेनन् । हमलाकारीसँग जीवनको भीख मागेँ । उनीहरु रोकिएनन् । म ढलिसकेपछि पनि जथाभावी हानिरहे । मेरो जीउमा बज्रेका बाँसका भाटाले त्रिबि परिसरको जंगल गुञ्जायमान भयो । त्यहीबीच तीन चारवटा मोटरसाइकल त्यहीँनेर आएर अडिए । म ढलेको अवस्थामा बचाउ बचाउ भनिरहेँ । आक्रमणकारी ममाथि धुरिइरहे ।
यो दुरावस्था पैदलै अफिस हिँडिरहेकी महिलाले देखिछिन् । अनि जोडले बचाउबचाउ भन्दै चिच्याइदिइन् । ती महिला मेरा निम्ति देवी बनेर अवतरित भएझैं लाग्यो । महिला चिच्याएपछि मोटरसाइकलवाहक पनि आए । उनीहरु मेरा निम्ति भगवान बनेर प्रकट भए । त्यो चिच्याहट सुनेर त्रिवि रंगशालामा काम गर्ने दिदीबहिनिहरु थपिए । त्यसपछि ममाथि आक्रमण गर्ने कायरहरु बुलेट र स्कूटर चढेर भागे । उनीहरुले प्रहरीको जस्तो घुरमैलो गाढा निलो लुगा, मुखमा मास्क र टाउकोमा एप्रोन लगाएका थिए ।
ठ्याक्कै प्रहरीजस्तै । घटना सुनियोजित थियो । मलाई हान्नुभन्दा पहिला मेरो बस्ने ठाउँ, मेरो मर्निङ वाक जाने समय, मेरो इभिनिङ वाक जाने समयको रेकी गरिएको थियो भन्नेमा म विश्वस्त छु । मैले त्रिविको समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागमा विद्यार्थीको एक जमातले लगाएको ताला फोडेका कारण मलाइ यसो गरिएको हो भनेर भनिएको छ, जुन सर्बथा गलत छ । मलाई कसैको ताला फुटाएर पाउनु के थियो ? हो निश्चय नै नयाँ विभागीय प्रमुखले सहयोग मागेपछि महिनौंदेखि लगाएको ताला खुलाउन उनीहरुसँग वार्ता गर्न हामी सबै लागेका हौं ।मेरो त सबैसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने लाइन थियो ।
उनीहरुले नमान्ने भएपछि ताला लगाएको ५२ दिन पछि विभागले सर्वोच्च अदालतको आदेश परिपालना गर्दै ताला फुटाएको हो । ताला फुटाउँदा उभिएका २० जनाजति शिक्षकमा म पनि एक थिएँ । अनि यो मैले फुटाएको ताला हो ? ताला फोडिएको दिन उनीहरुसँग केहि भनाभन भएको थियो । उनीहरुले हाम्रा गुरुलाई अपमान गर्न आउँदा बचाउमा एकदुई शब्द मैले बोलेकै हो । त्यसको तार्किक खण्डनको म स्वागत गर्छु नै । केही गल्ती भएमा मलाई माफी माग्न कुनै हिच्किचाहट हुँदैन । मलाई यसरी मार्ने तहको योजना बनाउने योजनाकार थिए, आफूलाई कांग्रेस सम्बद्ध कृष्ण सिटौला गुटको अध्यक्ष र सचिव बताउने हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल । त्रिविमा नेविसंघका चारवटा समूह छन् ।
मलाई यो सम्पूर्ण नेविसंघले गरेको लागेको थिएन । तथापि सम्पूर्ण नेविसंघले हामी अपराधीको पक्षमा छैनौं भन्नुको साटो बचाउमा आउनु निन्दनीय छ । हरि आचार्य करीब दश वर्षअघि डिग्री सकाएको समाजशास्त्र विभागकै एक टुरिष्ट विद्यार्थी हो । योगेन्द्र रावल झन् नितान्त चुनाव लड्ने अभिप्रायले मात्रै भर्ना भएको । रावल पहिलो, दोस्रो र तेस्रो सेमेष्टरमा एक दिन पनि कक्षामा नआउने टुरिष्ट विद्यार्थी नै हो भन्नुपर्दा मलाई खेद छ । यिनीहरु गैर–विद्यार्थी हुन् । यिनलाई विद्यार्थीका हकहित र विश्वविद्यालय सुधारसँग केही लिनुदिनु छैन । मलाई हान्न आउनेहरु त एकजना पनि विश्वविद्यालयका विद्यार्थी होइनन् ।
हरि र योगेन्द्र गुरु–शिष्य परम्परा र मानवताका हत्यारा हुन् । उनीहरुका भाडाका गुण्डाले सुरुमै आत्मसर्मपण गरिसकेको मान्छेलाई पनि छाडेनन् । कक्षामा नियमित पढ्न आउनेहरु मात्रै मेरा असली विद्यार्थी हुन । यस्ता गुण्डाको सहारा लिएर राजनीति गर्नेले न त असल विद्यार्थीलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् न त उनीहरुसँग विद्यार्थी हकहित र विश्वविद्यालय सुधारको कुनै एजेण्डा हुन्छ । त्यसैले विश्वविद्यालयमा टुरिष्टहरु विद्यार्थी नेता बन्ने र बनाइने परम्परा विश्वविद्यालय र देशको निम्ति दुर्भाग्य हो ।
यस्ता नक्कली विद्यार्थीले विद्यार्थी राजनीति ओगटेका कारण विश्वविद्यालयबाट वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्वको साटो डनहरु जन्मिँदैछन् । अन्तर्विरोधको जरोनढाँटी भन्नुपर्दा यसको जरो समाजशाष्त्र विभागको विभागीय प्रमुखसँग ठोक्किन्छ । हालका पदाधिकारी आएको धेरै समय भएको छैन । विश्वविद्यालय थिलथिलो बनाइनुमा तीन दशकदेखिको दलीय भागबण्डा र विश्वविद्यालयको यसअघिको प्रशासनको भूमिका बढी जिम्मेवार छ । यदि विश्वविद्यालय पहिल्यैदेखि विधि, पद्दति, योग्यता, क्षमता, र मेरिटमा चलेको हुन्थ्यो भने समाजशास्त्र विभागमा विभागीय प्रमुखको विषयलाई लिएर लड्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ।
विश्वविद्यालयका धेरैजसो विभाग तथा क्याम्पसहरुमा सबैभन्दा जुनियरलाई विभागीय प्रमुख बनाएर मेरिटको खिल्ली उडाउने काम पूर्व उपकुलपति तीर्थ खनियाँबाट भयो । आफू जाने बेलामा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै उनले पार्टीगत जोड घटाउको आधारमा आफ्नो खल्तीबाट काम चलाउ तीन महिने विभागीय प्रमुखको नियुक्ति बाँडे । समाजशास्त्रको हकमा चौथो वरीयताको शिक्षकलाई विभागीय प्रमुख बनाइयो । एउटा इतिहास र बिरासत बोकेको विभागमा बिसौं वर्ष सिनियर, योग्य, र क्षमतावान शिक्षक हुँदाहुँदै यसरी स्वेच्छाचारी ढंगले नियुक्ति बाँड्नु न्यायोचित थिएन । अहिले विधि र पद्दतिका ठूला कुरा गरेर आन्दोलनको नाटक गर्नेहरु राजनैतिक भागबण्डा र यो बेथितिका सारथी थिए । केन्द्रीय विभागमा नयाँ स्थितिप्राध्यापक धर्मकान्त बास्कोटा नयाँ उपकुलपति नियुक्त भएर आइसकेपछि पहिले भएका स्वेच्छाचारी निर्णयको पुनरावलोकन गर्दै विश्वविद्यालयका केन्द्रीय विभागहरुमा मेरिटको आधारमा विभागीय प्रमुखको नियुक्ति भयो । जस्तो उनले समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भाषा विज्ञान, र जनसंख्या विभागमा योग्यता, क्षमता, र बरिष्ठतालाई मापदण्ड बनाएर विभागीय प्रमुखको नियुक्ति गराए ।
समाजशास्त्र विभागको हकमा पहिले खनियाँको पालामा गरिएको स्वेच्छाचारी निर्णयको पुनरावलोकन भयो । शिक्षण संस्थाहरुमा मेरिट कायम गर्ने कामलाई साथ दिनु सबैको कर्तव्य हुन्थ्यो । म पनि त्यो कर्तव्यपथमा लागेको थिएँ । मेरिट मिचिएको थियो भने शान्तिपूर्ण रुपले त्यसको प्रतिरोध गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो नगरी जायज निर्णय भएका ठाउँबाटै गुण्डागर्दीको शैलीमा विरोध सुरु भयो र विभागमा ताल्चा लगाइयो । उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तोडफोड गरियो र उनको कुर्सी जलाइयो । तिसौं वर्ष पढाएका प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालयमा आउन नदिन निषेधाज्ञा जारी गरियो । यो सब भागबण्डाका लागि थियो । खल्तीका मान्छेलाई पद दिलाउन गरिएको थियो । हामीले त मेरिटमा भएको निर्णयलाई साथ समर्थन मात्रै दिएको हो । उनीहरुले विभागलाई बार्गेनिङ चिप्स बनाइरहेका थिए । प्रक्रिया नमिलेको हवाला दिएर अन्तर्यमा पदको बार्गेनिङ थियो । मेरिटको आधारमा विभागीय प्रमुखलाई साथ सर्मथन दिनेमा म एक्लो थिइनँ । विभागको ताल्चा पनि सर्वोच्चको आदेश र प्रशासनको सहयोगमा खोलिएको हो । त्यसैले मेराे प्रश्न छ ।प्रियजनहरु, विश्वविद्यालयको मुल परिसरभित्रै, त्यत्रो चहलपहल हुने समयमा कसैले मलाई यतिसम्मको हर्कत गर्ने आँट त्यसै गरेको होइन ।
उनीहरुलाई यो देशको प्रहरी, न्यायालयले छुन सक्दैन भन्ने कुरा घटनाका मूख्य सञ्चालक अहिलेसम्म पनि पक्राउ पर्न नसक्नु र अपराध स्विकारीसकेका अपराधीहरु पनि अदालतबट धमाधम छुट्नुले पुष्टि भइसकेको छ । मलाई हमला गरेर उनीहरुलाई विश्वविद्यालयमा केवल भय र अविश्वासको बातावरण फैलाएर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नु थियो । लाग्छ, उनीहरु सफल भए । प्राध्यापक मित्र, तपाईंहरु भने यता मेरो पार्टीगत पहिचान खोज्दै बस्नु भएको छ भन्ने सुन्दा मेरो मन भतभती पोलेको छ ।
तपाईंहरु मैनबत्तिजस्तै जल्ने, अरुलाई उज्यालो दिने र विस्तारै आफै सकिने पेसामा हुनुहुन्छ । मैले आदर गर्ने मेरा प्रिय गुरु, मेरा आदर्श यही पेसामा थिए र छन् । म एउटा सुदूरको फुच्चे, भुइँमान्छे लड्दै, भिड्दै संघर्ष गरेर तपाईंहरुको त्यही लाइनमा उभिन आएको थिएँ । तपाईंहरुसँग मिल्ने योभन्दा ठूलो मेरो पहिचान अरु के हुन सक्छ ? यो फरक विचारलाई नसहने बौद्धिकता विरोधी आक्रमण थियो । यस्तै भय, त्रास, र अविश्वासमा विश्वविद्यालयमा आलोचनात्मक र सृजनशील सिकाइ कसरी सम्भव होला ? बहस, छलफल, संवादको ठाउँमा यो देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दलको भातृ संगठनले बाँसका भाटाहरु ल्याएको छ । यस्तै माहोलमा तपाईंले गान्धी, मार्क्स, बुद्ध, कन्फ्युसियस, ह्यावरमास, पाउलो फ्रेरे, नोम चोम्स्की, एडबार्ड सइद, इम्यानुअल वालेस्टाइन, रोमिला थापर वा अरुन्धती रोय कोही पनि कसरी पढाउन सक्नुहुन्छ ? – चलाउने त्रिवि समाजशास्त्र विभागका उप-प्राध्यापक हुन् ।